लक डाउन आफैलाई बुझ्ने समय हो : कलाकार सरिता गिरी - Chinari Post
जेष्ठ ४,२०७९ / १० : १९ अपरान्ह / 2022-05-18 10:19 pm
लक डाउन आफैलाई बुझ्ने समय हो : कलाकार सरिता गिरी
चिनारी पोस्ट - २ वर्ष अगाडि
विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण अहिले नेपाल लकडाउन छ । नागरिक घरभित्र छन् । सरकारले नेपालमा यसले महामारीको रूप नलियोस् भनेर देश लकडाउन गरेको हो । लकडाउनसँगै देशका नागरिक घरभित्र छन् । दैनिक कामकाज छोडेर घरभित्र बसेका अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरु के गरिरहेका छन् । कसले कसरी समय कटाइरहेको छ ? नाट्यकर्मीहरुको दैनिकी कस्तो होला ? यि प्रश्नहरु धेरैको मनमा उब्जिन सक्छ । यही विषयमा केन्द्रित रहेर कलाकार तथा नाटक विधाको अभिनयमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल सरिता गिरीसँग लक डाउन अनुभवबारे कुरा गरेका छौँ । चिनारी पोस्टका लागि गिरीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालीहरुले लक डाउनको पहिलो अनुभव लिएका छन् । तपाईलाई चाँही कस्तो लागिरहेको छ ?
मलाई चाँही नौलो अनुभब खासै केही लागेको छैन् । किन कि म २४ घन्टा एउटै कोठामा बसिराख भने पनि बस्न सक्छु । तर कोठामा लेख–पढ् गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैगरी फिल्म हेर्नको लागि इन्टरनेट र चिया वा कफीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।अहिले लक डाउनका बेला पनि आफूले चाहेको काम जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाएको छु रमालो नै अनुभव भैराछ ।
लक डाउनले तपाईको जीवन शैली कस्तो बनाएको छ ? अर्थात अरुबेला र लक डाउनका बेलाको फरक के छ ?
लक डाउनले मलाई खासै असर गरेको छैन । जीवन शैलीमा पनि केही फरक पारेको छैन् । तर नियमित गर्ने काममा चाँही अनुशासित बनाएको अनुभव गरेको छु । घरमा परिवारसँग समय बिताउने प्रशस्त समय मिलेको छ । आफूले गर्न चाहेको काम र भोलिका दिनमा कसरी अगाडी जाने भन्ने कुरा सोच्नको लागि प्रशस्त समय मिलेको छ । आफैलाई बुझ्ने समय पनि हो यो ।
सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहनुभएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम महसुश भएको छ कि छैन ?
घरबाट बाहिर नगएकोले कोरोनाको खासै जोखिम महशुस गरेकी छैन् । पूर्ण रुपमा सावधानी अपनाईरहेको छु । अध्यात्म र विपश्यनामा बसेको महसुस भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? आफ्ना विचारहरु राख्ने बानी छ कि छैन ?
सामाजीक संजालमा खासै सक्रिय त छैन् । तर आफूले दिनु पर्ने अन्तरवार्ता, सजकता अपनाउनु पर्ने कुराहरु र आफ्ना बिचारहरु बेलाबेलामा लेखिराखेको हुन्छु । कहिलेकाँही कविताहरु पनि लेखिराखेको छु ।
कलाकारहरुले यो समयमा फेसबुक लाइभमा आएर दर्शकहरुलाई मनोरन्जन दिइरहेका छन् । तपाईले त्यस्तो केही गर्नुभएका छ ? वा तपाईको विधा नाटकलाई कुनै माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने योजना छ ?
अहिले रंगकर्मी साथीभाइहरूले घरमै बसेर विभिन्न काम गर्दै आउनु भएको छ । विभिन्न विधाका स्रस्टाहरुलई प्रत्यक्ष प्रशारणमा ल्याएर अन्तरक्रिया गरिरहनुभएको छ । मैले पनि घरमै बसेर सहभागिता हुने मैका पाएकी थिए । यो एउटा राम्रो कामको थालनी हो । थिएटर मलको आयोजनामा भर्चयल लिटरेचर फेस्टिबल किताब जात्रा २०२० सम्पन्न भयो । शैली थियटरले विश्व बाल कविताको प्रतियोगिता गर्दैछ । अब हामी पनि चाँडै एउटा फोरम थिएटर लिएर आउँदै छौ । यो प्रत्यक्ष्य प्रसारण गर्नेछौँ । समय र मिती चाडै घोषणा हुदैछ ।
कलाकारहरु यतिबेला घरभित्रका कामहरु गरिरहेको देखिन्छ । तपाईले विगतमा नगरेका घरायसी काम यतिबेला गर्नुभएको छ ?
हाहाहाहा... खासै त्यस्तो विषेश केही गरिन । किताबहरु पढँे, फिल्म र राम्रा सिरिज हेरेँ । अलि धेरै लेख्ने काम गरे । पकाउने काममा मलाई घरमा सबैले तारिफ नै गर्नुहुन्छ । र बाँकि रहेको समय आफूलाई मन लागेको काम गरेर बिताएको छु ।
अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ सबै देश बिदेशमा बसेका नेपालीका लागि ?
अहिले संसारभर माहामारी कोभिड १९ कोरोना भाईरसले गर्दा विश्वभरीमै त्रास फैलिएको छ । यो माहामारीले गर्दा धेरैले ज्यान गुमाई सकेका छन् । हामीहरु जाहँ जाहँ छौँ त्यही सुरक्षीत भएर बसौ । घरबाट बाहिर नजानुनै यो संक्रमणको औषधी उपचार हो । र अहिले यो संक्रमणले विशेष गरि उमेर पुगिसका आमा बुबाहरुलाई यो संक्रमण लाग्ने भएकोले उहाँहरुको बिशेष ध्यान दिन जरुरी छ । आफूलाई मन लागेका काम गरौँ, ध्यान–योग गरौँ, घरमै बसौँ भन्न चाहन्छु ।
अभिनय सिकेर कलाकारितामा आउनेलाई पैसा जति पनि छ- कलाकार सरीता गिरी
'नाटकमा पैसा र नाम टन्नै छ । कुरा यत्ति हो सहि स्थान, सहि मान्छे छनोट ...
२०२२ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्यको निकटमा छौँ : अर्थमन्त्री (अन्तर्वार्ता)
कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री ...
प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी भइरहेका बेला उनले भारतसँंगको सम्बन्धलाई लिएर कांगे्रसलाई ...
लक डाउनमा हाम्रो सम्पर्कमा आउने विद्यार्थीलाई सहयोग गर्छौँ : महामन्त्री पाण्डेय (भिडियो)
लकडाउन लम्बिएर १ महिना बितिसकेको छ । सरकारले गरेका निर्णयहरु पालना गर्ने, स्वास्थ्य सचेतनामा ध्यान ...
अध्यादेश आउनुमा प्रधानमन्त्री नै दोषी, फिर्ता गरेर राम्रो भयो : डा. मिनेन्द्र रिजाल
हिजो चुनाव लड्ने बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग लड्ने एकमात्र नेपाली आफु हो भनेर चुनाव जित्ने आज ...
गायक र संगीतकारको भेटबिना नै गीत तयार हुन्छन्,अनि कसरी राम्रो हुन्छ:गायक मदन गोपाल [हेर्नैपर्ने भिडियो]
गायक, संगीतकार तथा संगीत प्रशिक्षक मदन गोपालसगँ लकडाउन पछी सन्चालन गरेको अनलाईन संगीत कक्षाको बिषयमा ...
कोरोना महामारीमा चिरायु अस्पताल :२४ सै घण्टा स्वास्थ्य सेवा, डा.अमित र उप प्रबन्धक रवीसँग बिशेष कुराकानी
कोरोनाको सम्भावित जोखिम कम गर्नका लागि निजी अस्पतालहरुले खेलेका भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा चिनारीपोस्टका लागि चिरायु ...
अमेरिकामा कोरोनाको उपचारमा खटिएका चिकित्सकको अनुभव
डाक्टर रामु खरेल यतिबेला जर्जिया राज्यस्थित एटलान्टाको ग्राडी अस्पतालको इमर्जेन्सी डिपार्टमेण्टमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका ...
हाम्रो सेवा मात्रै होइन, वातावरणले पनि जो कोहीलाई लोभ्याउँछ : रविन्द्र थापा (भिडियो सहित)
‘कहिले आउँछ पालो’पछि अब अर्को नयाँ गीतको तयारीमा छु : शशी नेपाल (भिडियो सहित)
नेपाली गीत संगितको क्षेत्रको दायरा निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । नयाँ नयाँ प्रतिभाहरुको आगमन ...